जस्तासुकै पुरूषलाई पनि आँफुतिर मोहित पार्ने क्षमता हुन्छ यी राशि भएका युवतीहरूमा – Krazy NepaL
May 20, 2021 1052
यी राशिका पुरुषले दिदैनन् कहिले पनि धोका, प्रेमिकालाई दिन्छन् असिमित सुख र खुशी !
प्रेमको बारेमा हरेक व्यक्तिको फरक-फरक मत रहने गर्छ। प्रेमी-प्रेमिका बिचको सम्बन्धले हरेक व्यक्तिको दैनिकीमा समेत फरक पर्ने अनुसन्धानहरुले देखाएको छ। कसैको प्रेम सफल हुने गर्छ भने कसैको विफल।
विफल हुनुमा प्रेमी-प्रेमिका बीच हुने समझदारीले फरक पर्ने गर्छ भने केयरमा समेत फरक पर्ने गर्छ। खास गरि प्रेममा युवतीहरु आफुलाई प्रेमीबाट अत्याधिक माया मिलोस भन्ने चाहन्छन् भने राम्रो व्यवहारको समेत अपेक्षा समेत गर्छन्।
युवतीहरु आफ्नो प्रेम सम्बन्ध सफल रहोस् भन्ने चाहने गर्छन्। युवतीहरुको प्रेमलाई लिएर भिन्न चाहना भएका कारण आफुले खोजे जस्ताइ प्रेमीको आशा गर्छन्। युवतीहरुले चाहे अनुसारको गुन निम्न लिखित राशिमा हुने गर्छन्।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार सिंह राशीका पुरुषहरु आफ्नो प्रेमिकको इच्या बुझ्ने गर्छन् भने युवतिको चाहनाको समेत कदर गर्ने गर्छन्। यस राशिका पुरुषहरु दिर्घकालिन सम्बन्धमा विश्वास गर्ने गर्छन्। आफ्नो प्रेमिकाको खुशीको लागि जे पनि गर्न तयार हुने यस राशिक पुरुषहरु प्रेम सम्बन्धमा पूर्ण रुपले इमान्दर समेत रहने गर्छन्। प्रेमीको सानो कुरामा पनि खुशी रहने यस राशिका पुरुषहरुसँग जोदेको सम्बन्ध टिकाउ हुने गर्छ।
यस राशिका पुरुषहरु प्रेममा ईमानदार मात्र नभई भावनात्मक समेत हुने गर्छन्। जसका कारण यस राशिका पुरुषसँग जोडेको सम्बन्ध हत्त-पत्त टुटीहाल्दैन। यस राशिका पुरुषहरु प्रेम-विवाहमा समेत विश्वास गर्ने गर्छन्। आफ्नो प्रेमिकाको गरेक मारमा समेत बुझ्ने खुवी यस राशिका पुरुषहरु संग रहने गर्छ। यस राशिको कुण्डलीमा चन्द्रमा चारै भागमा रहने भएका कारण पनि प्रेमिकाको लागि अत्याधिक प्रेमले भरिपुर्ण रहने गर्छन्।
Prevदाँतको किरालाई मार्न र दुखाइ कम गर्नका लागी अपनाउनुस् यी ४ घरेलु उपाय
” नयाँ मोडलको ‘बुलेट बाइक’निकै सस्तो मूल्यमा आउदै छ “
एक पछि अर्को बज्रपात सहेका डम्बर आखिर जिन्दगीसंग हारे, छोरा गुमाएको एक वर्ष नपुग्दै आफै अस्ताए
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (43977)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (23155)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (15853)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (13956)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13121)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (12374)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12171)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (11765)